ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »3တစ်ခုအံ့အားသင့်စေဆက်ဆံရေးများအတွက်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 25 2021 |2မိဖတ်ပြီးသား
ဆက်ဆံရေးကိုကျွန်တော်တို့တွင်ရှိသည်ပေးနိုင်သောအကောင်းဆုံးမယုံနိုင်စရာအရာများမှာ. သို့သော်အသက်တာ၌ရှိသမျှကိုအရေးကြီးတဲ့အရာနှင့်တူသူတို့အလုပ်တွေအများကြီးလိုအပ်. ကျနော်တို့သေချာအမှုသည်ငါတို့၏အံ့သြပြည်ထောင်စုကိုထိန်းသိမ်းစေရမယ်. သို့သော်ထိုကောင်းသောအရာတစုံတခုအနည်းငယ်ရိုးရှင်းတဲ့အပြောင်းအလဲအားဖြင့်ငါတို့သည်ပိုကောင်းတဲ့သေချာနိုင်ဆုံးနဲ့အရေးနှင့်ငါတို့ကျွန်တော်ချစ်တဦးတည်းအကြားတစ်ဦးပျော်ရွှင်ပြည်ထောင်စုခြင်းဖြစ်သည်. ဒီနေရာမှာတစ်ဦးသည်ကြီးမြတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီရုံသုံးအကြံပေးချက်များသည်:
communication မဆိုဆက်ဆံရေးကအဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်. စကားပြောပါနဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူပွင့်လင်းဖြစ်. သင်နှင့်အတူပွင့်လင်းစေနိုင်သည်သောသူအပေါင်းတို့ကိုနောက်သို့သင်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ပွင့်လင်းမဖြစ်နိုင်လျှင်? သူတို့ကိုသင်မည်သို့ခံစားရသိပါစေ, သို့သော်လူကြိုက်သင်ပါလိမ့်မယ်မည်သို့ခံစားရ, ထိုသူတို့အားထိုအရပ်မှသွားခွင့်ပြုပါ. သင်ပြုနိုင်ပါသည်ပိုဆိုးအချက်ကတော့ line ကိုဆင်းပြန်ပြီးတော့တို့ကိုစောင့်ရှောက်နှစ်ပေါင်းလုံးဝသင်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းပြီဟုမိန့်တော်မူ၏သငျ့တစ်ခုခုကျော်ပေါက်ကွဲသည်. တစ်စုံတစ်ဦးကအမှန်တကယ်သင့်ကိုချစ်မယ်ဆိုရင်သူတို့သင်နှင့်အတူအရာအားလုံးအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်, ကဖို့အချိန်သူတို့ကိုကြာလျှင်ပင်. ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင်နောက်ထပ်ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်ပိုမိုနီးကပ်စွာအစားပေါက်ကြလိမ့်မည်.
ကြံ့ခိုင်မှု Going အရာများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးထွက် Keep
သင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလုံအလောက်မရနိုင်တော့သည့်အခါခဏတစ်ဖြုတ်ပြီးနောက်ဆက်ဆံရေး၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြမ်းအစောပိုင်းကာလမှ စ. စစ်မှစတင်နိုင်ပါသည်. သင်ဆဲအလွန်တစ်ခုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လျက်ရှိကြောင်းကိုသင့်ကိုနှစ်သက်တယောက်လမ်းကို sexy အတွင်းခံအဝတ်အစားဝယ်ယူဖြင့်သို့မဟုတ်တောင်မှကိုယ့်မိတ်ကပ်လုပ်နေတယ်အားဖြင့်ပြရန်. ဧဒုံနှုတ်ခမ်း. သဲမျက်စိ. သူတို့ဆဲကအားလုံးကိုအောက်ကျင့်သောကြောင့်သူတို့ကိုနေဆဲသင်ချင်တယ်လုပ်ပါ.
လူတွေသင်သည်ထိုသူတို့စိတ်အားထက်သန်သူတို့ကိုစောင့်ဖို့ကိုဆိုလိုတာဆက်ဆံဖို့လိုပါတယ်ဆိုဘယ်အရပ်ဤမျှလောက်များစွာသောချိန်းတွေ့ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ကြပါပြီ. ဒါဟာငါ့အဖို့ဒါမှားဟန်. နောက်ဆုံးတော့, လူအများစုမှာသူတို့ရှာဖွေနေကြပါတယ်ဆိုအမှုသည်အဘယ်သို့သောအ? ဟာသနှင့်အတူ, ကြင်နာသောသူတစ်စုံတစ်ဦးကလူကြိုက်အများဆုံးအဖြေဖြစ်ဟန်. တစ်ခါတစ်ရံအငါချိန်းတွေ့ရေကူးကန်နှင့်အတူမှားယွင်းနေသည်အဘယ်သို့သောအထင်. ဒီမျက်နှာဖုံးပေါ်တင်ထားတဲ့လွန်းတဲ့လူအများအပြား doormat တူရှာဖွေနေသူတို့ကိုယ်သူတို့ရပ်တန့်ဖို့ရှိပါတယ်. ကြင်နာတကယ်တော့သင့်ရဲ့အပြင်းထန်ဆုံး tool ကိုသည်အဘယ်ကအားနည်းနေခဲ့တာကြောင့်ဆက်ဆံရေးကိုမှကြွလာသောအခါမကောင်းတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရပြီမှဟန်ခဲ့. နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသူတစ်စုံတစ်ဦးထံမှကြွလာသောနွေးထွေးမှု, ကြင်နာနှင့်အတူအဘယ်သူသင်သိသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအဘို့ဖြစ်၏ outdone မရနိုင်ပါ. ဒါမျိုးကိုသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရန်နှင့်သူတို့ကြင်နာမှုနှင့်အတူတုန့်ပြန်လိမ့်မည်. ထိုအခါသူတို့သည်သင်၏အချိန်မပြုထိုက်မပြုရင်. မည်သူမဆိုနှင့်မေတ္တာကိုတစ်ဦးလျောက်ပတ်သောလူ့ဖြစ်တည်မှုသင့်သည်တံခါးနားမှာရောက်ရှိမည်ခဲ့အလျှော့ပေးလိုက်လျောမပြုပါနှင့်အစဉ်အစဉ်စိတ်ကူးထက် သာ. ခံရလတံ့ဖြစ်နိုင်.